၃.၁။ သတင်းရင်းမြစ်က ဖြေဆိုရန် ငြင်းဆန်သည်ကို သတင်းတွင် အသုံးပြုခြင်း - Investigative Journalism Manual | Investigative Journalism Manual
> Chapters > အခန်း ၇။ > ၃။ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမျာနှင့် ဆက်ဆံခြင်း > ၃.၁။ သတင်းရင်းမြစ်က ဖြေဆိုရန် ငြင်းဆန်သည်ကို သတင်းတွင် အသုံးပြုခြင်း
သတင်းရင်းမြစ်တစ်ဦးက သင့်မေးခွန်းများကို ဖြေရန်ဆန္ဒမရှိသဖြင့် မဖြေလိုကြောင်းပြောဆိုလာသည်ကို သင့်အနေဖြင့် အသင့်ပြင်ဆင်ထားနိုင်သည်။ ရုပ်သံ သို့မဟုတ် ရေဒီယိုအတွက် အသံဖမ်းယူရာတွင် ဖြေဆိုရန်ငြင်းဆန်မှုအား တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ပြောကြားလာပါက လူအများကြားသိနိုင်သည်ဖြစ်ရာ ကျွမ်းကျင်စွာ တည်းဖြတ်နိုင်ဖို့ လိုပါသည်။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုများတွင်မူ “…. က …. ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြေဆိုရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သည်” ဟု ထည့်သွင်းဖော်ပြနိုင်သည်။ ယင်းကို တုံ့ပြန်ဖြေကြားရန် ပျက်ကွက်မှုအဖြစ် အဓိပ္ပါယ်မကောက်ဘဲ သတင်းပေးသည့် အနေဖြင့်သာ ဖော်ပြရမည်။ ထိုသို့ငြင်းဆန်မှုကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရန်မှာ ပရိသတ်ကိစ္စသာ ဖြစ်သည်။
အရေးကြီးသည့် မေးခွန်းများအား မဖြေလိုကြောင်း ယတိပြတ်ငြင်းဆန်မှုကြောင့် သင့်အင်တာဗျူးကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးခံလိုက်ရမည့် အနေအထားမျိုးပင် ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်။ ရံဖန်ရံခါတွင် ထိုအချက်က ထိရောက်မှုရှိသည်။ ထိုအခါ သင်ပြောရမည်မှာ “ဒီကိစ္စကို ကျွန်တော်/ကျွန်မ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါတယ် ဝန်ကြီးခင်ဗျာ/ရှင့်။ ဒီသတင်းမှာ အရေးအကြီးဆုံး ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝန်ကြီးဆီက ပြောတာတစ်ခုခု မကြားရဘဲနေမယ်လို့ မထင်ခဲ့မိဘူး။ ခုလိုဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်/ကျွန်မ ကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိထားတဲ့ အချက်တွေရယ်၊ ကျွမ်းကျင်သူတွေ၊ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ကြုံခဲ့သူတွေဆီက မှတ်ချက်တွေနဲ့ပဲ သတင်းကို ဆက်ရေးရတော့မှာပေါ့။ ဒီကိစ္စကို ဝန်ကြီးထံမှ မှတ်ချက်ပေးခြင်းမရှိပါလို့ပဲ ထည့်ရေးလိုက်ရမလား” ဟူ၍ပင်။ ထိုအနေအထားတွင် အမြော်အမြင်ရှိသည့် အင်တာဗျူးဖြေဆိုသူတစ်ဦးက သတင်းထဲတွင် လုံးဝဖော်ပြခံရခြင်း မရှိသည့်အစား တစ်ခုခုပြောမှကောင်းမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပေလိမ့်မည်။ သို့သော် သူတို့က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဆက်လက်ငြင်းဆန်ဆဲဖြစ်ပါက အသာတကြည်ပင် ခွင့်ပြုရပါမည်။
အကယ်၍ အချို့မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုမည်မဟုတ်ကြောင့် ကြိုပြောထားလျှင်ပင် ကိုယ်မေးစရာရှိသည့် မေးခွန်းများအားလုံးကို မေးကာ တကယ်ဖြေမဖြေ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရအောင် ကြိုးစားနိုင်ပါသည်။ ဤနည်းသည် အထူးသဖြင့် အသံလွှင့်သတင်းတင်ဆက်မှုများအတွက် ပို၍ပင် အဆင်ပြေပါသည်။ အနည်းဆုံး သင့်ဖက်မှ မေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ခြင်း ရှိမရှိကို သင့်ပရိသတ်နှင့် အင်တာဗျူးဖြေဆိုသူတို့ အသိပင် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်က မေးရန် မကြိုးစားခဲ့ပါက ကြိုးစားမမေးရကောင်းလားဟု ဝေဖန်ပြစ်တင်ခံရနိုင်ပါသည်။ သင့်အင်တာဗျူးဖြေသူကလည်း နောင်အခါကျမှ “မမေးလို့ပါ၊ မေးရင် ဖြေမှာပေါ့” ဟု ဆိုလာနိုင်ပါသေးသည်။